'चितवनको सडकमा गैर संवैधानिक नारा'
अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिन सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : चौधरी
सनराइज खबर स‌ंवाददाता ३ भदौ मंगलबार, २०७६	१४:१०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सांसदहरुले पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र रवि लामिछाने पक्राउको अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिन सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले अनुसन्धान चलिरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि भएको बताइन् । ‘नत रवि दोषी हुन भन्ने प्रमाणित भएको छ । नत निर्दोष हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । अनुसन्धानका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन खोज्ने विषयलाई विल्कुलै सहि मान्न सकिदैन । यसलाई रोक्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’ चौधरीले भनिन् ।
अनुसन्धानमा अवरोध नभए तथ्यमा टेकेर सत्य पत्ता लगाउँन सकिने भन्दै उनले निर्दोषले सजाय भोग्न नपर्ने र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने बताइन् ।
राज्यका संयन्त्रलाई 'वाइपास' गरेर अघि बढ्न खोज्दा देशमा उत्पन्न हुन सक्ने भयावह अवस्थालाई सबैले देख्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘देश विधिले चलाउने हो । कानुनको सर्वोच्चतालाई सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्छ’ शान्ताले भनिन् ।
त्यसैगरी नेकपाका अर्का सांसद हितबहादुर तामाङले चितवनको सडकमा गैरसंवैधानिक खालको नारा लागिरहेको बताए । उनले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । ‘राज्यले कुनै पक्षबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्नुपर्छ, त्यस्ता नारा तत्काल रोक्नुर्छ’ तामाङले भने ।
सकियो संघीय संसदको चालु अधिवेशन
२ असोज, २०७६
सत्य सेतो र कालो हुदैन, सत्य खैरो हुन्छ– बाबुराम भट्टराई
नेम्वाङले गरे आशा, उत्साह र उमंगका कुरा
देउवाकाे प्रश्‍न- प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंको राज्यमा को सुरक्षित छ ?
भूमिहीन सुकुम्वासीले जग्गा पाउँदा प्रतिपक्षीकाे टाउकाे किन दुखेकाे ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने